Iapile iphone ibetha irekhodi kuthi lesabelo sentengiso njengoko ibango lezinto eziphambili likhula
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPhone ibetha irekhodi lesabelo semarike yase-US njengoko ibango le-flagship likhula
I-Apple iPhone ibetha irekhodi lesabelo semarike yase-US njengoko ibango le-flagship likhula
I-iPhone 12 kunye neGPS S20 FE igcine imarike ye-smartphone yaseMelika iqhubeka kwikota yokugqibela ka-2020 kwaye siyabulela ku ingxelo entsha Ngoku sijonga ngakumbi ukusebenza kohlobo ngalunye.
Isabelo sentengiso se-iPhone kunye neapos; s sifikelele kwinqanaba eliphezulu ngalo lonke ixesha ngoDisemba
Uphando lweNqakuUtyhile ukuba iimveliso ze-smartphone zaseMelika zithengisiwe, azithunyelwanga, zizonke izixhobo ezizizigidi ezili-14.9 ngoDisemba. Oko kuyahambelana noDisemba 2019, kodwa bekukho utshintsho olukhulu kwindlela ezihanjiswa ngayo ezi ntengiso.
I-Apple yaqhuba icandelo le-smartphone laseMelika ngoDisemba kwaye yonyusa intengiso yayo phantse ngesinye kwisithathu ngenxa yomelele Ifowuni ye-12 5G ibango. Inike i-iPhone a irekhodi lesabelo sentengiso ye-64% kwinyanga yokugqibela ye-2020.
NgoDisemba ngo-2019, ukubhekisa phambili, ulungelelwaniso oludumileyo lwe-Apple olune-49% yentengiso ye-smartphone yase-US. Phakathi kukaJanuwari noSeptemba 2020, kwelinye icala, isabelo sentengiso sika-Apple sasinda malunga ne-45%.
Nje ukuba i-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro zibethe iishelufa ngasekupheleni kuka-Okthobha, isabelo se-Apple sase-US satshitshiswa saya kwi-52%. Ukuqaliswa kwe-iPhone 12 mini kunye ne-iPhone 12 Pro Max ngo-Novemba kuyise kwi-64%, eli linqanaba apile zigcinwe ngoDisemba.
Ukuya kwi-2021, i-Apple kulindeleke ukuba ifumane ukuhla ngokuthe ngcembe kwintengiso njengoko uthotho lwe-iPhone 12 luqala ukubonisa ubudala bayo kunye nezixhobo ezitsha ezivela kubavelisi abaphikisanayo betha iishelufa. Kodwa uphawu luqala unyaka kwinqanaba eliphezulu kakhulu kunesiqhelo.
Isamsung iyaqhubeka nokusebenza kakuhle
Isamsung yayikuphela kolunye uphawu olwaqhubeka nokusebenza kakuhle unyaka nonyaka kumzi mveliso we-smartphone wase-US kwikota ephelileyo. Igcine ngempumelelo isabelo sayo sentengiso se-20% ngoDisemba nangona ibango le-iPhone 12 linamandla.
Njengo-Apple, isabelo se-Samsung ngo-Novemba sasifana nesiphumo saso ngoDisemba. Kodwa ngo-Okthobha uphawu lwaseMzantsi Korea lwenza i-26% yomtsalane kwi-US yokuthengisa.
Njengoko kutyhilwe kwiIndawo yokuphikisaIngxelo yangaphambili, le ntsebenzo yayijongwa ikakhulu kwi-S20 FE's ngo-Okthobha kunokuba isebenze ngokuqinileyo kuthotho lwepremiyamu ye-Galaxy Note 20.
Isamsung inamandla okomeleleyo akhokelela kwi-2021 kwaye kufuneka ifumane ukonyusa okubonakalayo kokuthengisa ukuqala ngasekupheleni kukaJanuwari ngenxa yokufika kwe Uthotho lweGPS S21 . Kuyafuneka ukuba uqaphele ukuba ngoJanuwari nangoFebruwari ziinyanga ezicothayo kwishishini laseMelika, nangona kunjalo.
Ii-smartphones ze-premium ziya zithandwa e-US
Imakethi yemarike yaseMelika iyonke iyanda malunga nezinto ekuthiwa yipremiyamu kunye nezixhobo ze-premium. Ezangaphambili zibandakanya zonke izixhobo ezinamaxabiso aphakathi kwe- $ 600-800 kwaye eyokugqibela igubungela naziphi na iimveliso ezinamaxabiso ngaphezulu kwe- $ 800.
La macandelo abalwa phantse isibini kwisithathu sentengiso ye-smartphone yase-US ngo-Disemba kwaye banamava okukhula okuhlangeneyo konyaka-nge-54%, utshintsho olwenziweyo kukonyuselwa okukhulu kurhwebo kubathwali kunye nentengiso ejikeleze i5G.
Ezi ziindaba ezimnandi zeSamsung kunye neApple kuba izixhobo zepremiyamu ziyalela imida ephezulu kakhulu yenzuzo, kodwa enye imeko ebonakalayo ayilunganga phantse kuzo zonke ezinye iimveliso.
Ixesha elingaphezulu, icandelo le-smartphone lase-US lizidibanise ngeenxa zonke kwimveliso ezine-iApple, iSamsung, LG, kunye neMotorola- nabanye abadlali abakhuphisana ngesilayidi esincinci sentengiso.
Kodwa kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo, abathengi abaninzi baseMelika batshintshele kwi-Apple okanye i-Samsung, beshiya iMotorola ngesabelo esincinci kwaye i-LG isokola ukugcina i-10% yayo yesiqhelo.
uphando Kwelinye icala, wabona ukuwa kwePixel; Iselfowuni ijongene nomoya ongxamisekileyo njengoko ibango leefowuni zohlahlo-lwabiwo mali luyancipha; I-ZTE ibonile isabelo sayo sentengiso yaseMelika phantse sanyamalala ngokupheleleyo.
Umlindo we-4 womhla wokukhutshwa
Umhla wokukhutshwa kwe-galaxy s7 att
6s dibanisa vs s6 umda
Ababhalisi abatsha beSpotify bafumana iinyanga ezi-3 zokusasazwa komculo wePrimiyamu nge- $ 0.99 iyonke
IMicrosoft Office ye-iPad ekugqibeleni ifumana iSplit View kwimultitasking kwiLizwi nakwiPowerPoint
Uhlelo lokusebenza lwefowuni kaGoogle lokufumana isibhengezo se-ID yomntu otsala umnxeba kunye nezinto ezimbalwa kungekudala
Spotify & apos; inqaku elitsha ekugqibeleni liyibeka ngokuhambelana neApple Music
IVerizon vs Xfinity: izicwangciso zeselfowuni, amaxabiso kunye nokuthelekiswa kweefowuni
I-Apple ayisoze yenze i-iPhone e-United States, nasi isizathu
I-Samsung Gear S2 smartwatch enamahemuhemu okubandakanya i-nano SIM khadi
I-Apple Bukela i-SE: yonke imibala kwaye yeyiphi imibala ye-Apple Watch SE ekufuneka uyifumene?
Abasebenzisi beLastPass simahla kungekudala baya kuthintelwa kuhlobo olunye lwesixhobo
I-Facebook Messenger iya kunciphisa ukuhambisa imiyalezo ukulwa ulwazi olungelulo